Iibhokisi ezakhayo zokuzimela ezisegadi; Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iibhokisi ezakhayo zokuzakhela emasimini
Ibhokisi lokubamba iqhosha lokuzenzela: lisebenza njani!
Kufuneka ukuba ibhokisi lokuhlalisa eyakhelwe yilapho ilungele?
Ngokuphindaphindiweyo uyazibona ezidiyeni okanye emahlathi: iibhokisi yokwakha zeentaka zethu zasekhaya. Yintoni ekugxothwa ngabaninzi ngokungenasidingo okanye njengento yokuzilibazisa, kodwa igcina ezinye iintaka ebomini busika.
Iibhokisi zokuzikhusela ezizimeleyo zikhusela iintsuku zebusika ezibandayo
Ukuzakhela iibhokisi yokwakha awona nje ama-hotbeds, kodwa akhonza ebusika njengendawo yokukhusela ebanda. I-Nature Conservation Union yaseJamani ibona ukungabikho kwezilwanyana ezizalisayo, kuba imidala kunye nemithi ebolile ilahlekile emahlathini ethu, nemihlathi yemvelo ayinqongophala.
Yakha ibhokisi lokuhlalisa ngokwakho
Ngako oko, kubalulekile ukubonelela iintaka ngeendawo zokuzalisa ngokwenza izinto ngendlela eyakhelweyo iibhokisi yokwakha sipho.
Yakha iibhokisi zeentlaba nabantwana ngokwakho
Ngokuqinisekileyo unako kuphela ibhokisi yokwakha Thenga. Kodwa yenza ingqiqo kwaye ihle, i Ibhokisi lokuhlalisa ekwakheni kunye nabantwana ngokwabo, Okokuqala, izenzo ezinjalo zibandakanya ixesha elibalulekileyo elichithwe kunye; okwesibini, abantwana bafunda okungakumbi malunga nokuziphatha kweentaka kunye nokukhetha kwabo.
Ngaba kunjalo ibhokisi yokwakha Emva kokumiselwa kunye nokuzonwabisa ngokutyeleleka, abantwana banomsebenzi omkhulu wokuphumelela ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho. Ebusika, benentlanzi, banokubona i-titmice, i-wrens, nezinye iindidi ezininzi - kunye ne-squirrels - ukubukela ibhokisi yokwakha ukuyisebenzisa njengendawo yokulala.
Ngokubusika kakhulu kubusika kusindisa ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho ezinye zeentaka. Kuba ngokukodwa ebusika, xa izilwanyana zifumana ukutya okuncinci, zitshisa amaninzi amaninzi omzimba. Ubusuku obubandayo sele sele isigwebo sokufa.
der ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho Eyona nto iyenziwe ngeprruce, i-fir okanye i-beech enkuni, emele ibe malunga no-intshi ezimbini. Esikhundleni semithi yokulondoloza (ngokuchasene ne-fungal infestation, njl.) Kufuneka usebenzise i-linseed i-oyile okanye ipayipi enobungakanani bendawo, ngaphandle koko unobungozi kwizilwanyana.
Kwakhona umbutho wongqongqo wolondolozo ucebisa ukusebenzisa i-screws endaweni yezikhonkwane, kuba ibhokisi iyakucocwa kamva. Kubaluleke kakhulu izimbobo zokungena emzantsi phantsi ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho.
Ngokuxhomekeke kwintlobo yeentaka eziza kuzaliswa ebhokisini, umntu makabeke ubungakanani bendawo yokungena. Ngokomzekelo, kwiimitha ezingama-30, umzekelo, i-nuthatches, isihloko esikhulu, kunye nentlunkulu inokudlula, ngelixa i-millimitha ezingamashumi amabini anesihlanu, iintlobo ezihlukeneyo kuphela zezitifiketi zingenza.
Kwakhona ubukhulu bezinto zangaphakathi banquma malunga neentaka, zabo ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho nesakhe. Kukulungele ukuhlola abantwana bakho kwangaphambili ukuba yiziphi iintaka ezihlala kwindawo yazo zixhomekeke kwiibhokisi zokuhlamba kwaye zihlengahlengise ubungakanani ngokufanelekileyo. Isiseko sebhokisi kufuneka ngokuqinisekileyo sibe ngaphezu kweeshumi elinambini ukuya kwishumi elinambini ngamasentimitha. Ngokuqinisekileyo, incwadana yokwakha efanelekileyo necacileyo ingalayishwa lula kwi-intanethi.
Nazi ezinye iingcebiso zokuxhoma ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho, Ingeniso yokungena kufuneka ibhekise empuma kwaye ibhokisi kufuneka ixhomeke ubuncinane ezimbini iimitha ngaphaya komhlaba. Imithi unako iibhokisi zeendawo zokuzimela lungise ngeengcingo ze-wire okanye izipikili ezingenasici.
Ukongezelela, kufuneka uqinisekise ukuba akukho namanzi angenelela xa kunetha: Kule nto, vumela ukuba ibhokisi ibhekise phambili, nokuba ngaba i-Einflugloch ayiboni kakuhle. Qinisekisa ukuba ibhokisi ayikwazi ukucinywa ngamartart okanye ikati!
Iindawo ezifanelekileyo ezikufuphi zemithi zihamba, iindonga, izindonga zendlu kunye namabhaloni. Ibhokisi ihlanjululwa emva kwexesha lokuzalisa. Susa nje isidleke esidala kunye ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho ibrashi ngaphandle. Qiniseka ukuba ugqoke iiglavu kwaye ungayifaki ibhokisi kunye nawe kwindlu, kukho umngcipheko wokusuleleka apha!
Eli xesha lihle, elinye ibhokisi yokwakha eyakhelwe ngokwakho ukuxhoma ukuwa. Emva koko unokwenza isando kwaye unqabile!
Ibali elifutshane kubantwana - adventure kwintsimi
Umququzeleli | igadi
Iingcebiso zokulima - Yiyo ndlela umyezo ukhula kwaye ukhula
Iingcebiso zokulima - Nisela umyezo
Iingcebiso zeJadi - Igadi ngokufanelekileyo